အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: အပြုံးတစ်ခုရဲ့ နောက်ကွယ်
28 Responses to “အပြုံးတစ်ခုရဲ့ နောက်ကွယ်”
အမှတ် တမဲ့ကိုယ်ပြု ခဲ့မိတဲ့အပြု အမှု လေးတစ်ခု ကြောင့် 
တပါးသူ အတွက် တစ်သက် လုံး အမှတ်တရ ဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်ကလေး ပါပဲ .. လို့ ။
ကိုယ်က အပြု သဘော ဆောင်ခဲ့တာကိုး ၊
“အပြုံးတစ်ခုရဲ့ နောက်ကွယ်” လေးလည်း ကောင်းတာပဲ၊
အမှတ်တမဲ့ မှ အမှတ်တရ သို့ပေါ့။
အပြုံးတစ်ခုရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ရှိခဲ့တဲ့ တန်ဖိုးကြီးမားမှု့ တဲ့လား အမချော.... ကောင်းလိုက်တာ ကျေးဇူးပါပဲ :)
ဟုတ်တယ် ကျနော်လည်း ခံစားလို့ရတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူငယ်ချင်းဆိုတာ တစ်ခါတလေ မောင်နှမချင်း ချစ်သူချင်းတိုင်ပင်လို့မရတဲ့ အရာမျိုးတွေကိုတောင် ကိုယ်နဲ့ထပ်တူမျှဝေ ခံစားပေးနိုင်ကြတာ ။ သူငယ်ချင်းအစစ်အမှန်ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပွားလို့တင်စားချင်မိတယ် ။ စစ်မှန်နွေးထွေးတဲ့အပြုံးတွေ သူငယ်ချင်းတိုင်းမှာရှိနေမှာပါ ။
အေးဗျာ အစ်မရေ... အဖိုးတန်အတွေးလေးပေးတယ်ဗျာ
ဘာပြောပြော ကိုယ့်ရဲ့မထင်မှတ်တဲ့ အပြုမှုလေးက တပါးသူအတွက် သက်ရောက်မူရှိ အနည်းနဲ့များရှိတာ သတိထားရမယ်
ဒီဘာသာပြန်လေး တစ်နေရာရာမှာ ဖတ်ဖူးတယ်မကြီး..
ခုလိုလေး ပြန်ဖတ်ရတော့ နွေးသွားသလိုပဲလေ..။
စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးပဲ..ဖတ်လိုက်တိုင်း အပြုံးလေးတစ်ပွင့်
အပြုံးရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ တခြားရော ဘာတွေ ရှိအုံးမလဲလို့ စဉ်းစားမိပါတယ်
အမစာတွေဖတ်ရတာ ရင်ထဲထိ တိုက်ရိုက်ရောက်တာချည်းဘဲ။ စာဖတ်ပြီးပြီးချင်းဆိုရင် အဲဒီသင်ခန်းစာတွေယူပြီး လက်တွေ့ကျင့်ကြံမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးတွေ ပေါက်မိတာချည်းဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ကြာလာတော့လဲ ပုထုဇဉ်ပီပီ စိတ်တွေက သိပ်ထိန်းလို့မရနိုင်တာကို တွေ့ရတယ်။ တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာတွေပါ။ နောက် မချော စာအုပ်အဖြစ် ထုတ်ဖြစ်ရင် မချောရေးတဲ့ စာအုပ်မှန်သမျှ ၀ယ်ဖတ်မယ်။ တကယ်ပြောတာ။ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
ကိုယ့်အပြုအမူ၊ ကိုယ့်အပြောအဆိုတွေကြောင့် ဘယ်သူ့ကိုမှ စိတ်ထိခိုက် နာကျင်မှုမျိုးတွေ မဖြစ်စေချင်ဘူးးးးး အဲ့လိုဖြစ်မှာကိုလဲ အကြောက်ဆုံးပဲ ချောရယ်...
သူငယ်ချင်းကောင်း၊ မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာ လူတိုင်းမှာရှိတတ်တယ်။ တန်ဘိုးဖြတ်လို့ မရတဲ့ ကူညီမှုတွေ၊ မမေ့ရက်နိုင်တဲ့ အမှတ်တရတွေက မိတ်ဆွေကောင်းလို့ ကဗျည်းတင်ပေးတယ်။ အကူညီတွေ၊ အမှတ်တရတွေကလည်း သေးသေးလေးကနေ အကြီးကြီးအထိရှိတတ်တယ်။ ထိရောက်တဲ့ ကူညီမှုလေးတွေက ဘ၀မှာ မမေ့နိုင်စရာဖြစ်လာတတ်တယ်။ အနှစ်ကျတဲ့ ပို့စ်လေးပါချောရေ..။
အမရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတိုးပွားစေတဲ့ စာတွေ အများကြီးဆက်လက် ဖြန့်ဝေပေးပါအုံးနော်...
သာမန်ဇာတ်လမ်းလေးပဲ ထင်နေချိန် နောက်ဆုံး လှည့်ကွက်လေး ဖတ်ရမှ တော်တော်သဘောကျသွားတယ်။ ပြင်ပမှာလည်း တကယ်ကို ဖြစ်နိင်ချေ ရှိတဲ့ အဖြစ်မျိုးပါပဲ။
သူငယ်ချင်းကောင်းဆိုတာ ၂ ယောက်လုံး စိတ်ထားဖြူစင် မှန်ကန်နေဖို့ လိုတယ်မဟုတ်လား။
တော်တော် ကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးပါ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အမှတ်မထင် အပြုအမူလေးတစ်ခုက တစ်ဖက်လူရဲ့ ဘဝကို ပြောင်းလဲမှူ (အကောင်းဆုံး၊ ဒါမှမဟုတ် အဆိုးဆုံး အထိ) ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာ ကို ကျွန်တော်တို့ အားလုံးလည်း သတိတရား ရစေပါတယ်ဗျာ..
မထင်မှတ်တဲ့ ကူညီမှုလေးက လူ့အသက်တစ်ချောင်းကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါလား..........
သူငယ်ချင်းကောင်းဆိုတာ ဘဝမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သလို ကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်းကို ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်သူဆိုတာ ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်အပျက်လေးမို့...........
အပြုံးတစ်ပွင့်ဟာ ဘဝတစ်ခု အသက်တစ်ချောင်းကိုတောင်ကယ်တင်နိုင်တာ မှတ်သားသွားပါတယ်။ မမရေးး
Than Than Swe said...
Helping everybody can safe someone's life.
သူတပါးမှာ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင်အကျိုးရှိအောင် ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အပြုံးလေးတပွင့်
တကယ်ကောင်းတဲ့ post ပါပဲ။ မ စာရေးကောင်းတယ်။
အပြုံးလေးတစ်ပွင့်ဟာ အဲလောက်တောင်တန်ဖိုးရှိတယ်လား။ တကယ်ကိုရင်ထဲကလာတဲ့ လှိုက်လှဲနွေးထွေးတဲ့အပြုံးမျိုးမို့လို့ဖြစ်မယ်နော်။
သူငယ်ချင်းကောင်း မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာ တကယ့်ကို တန်ဖိုးဖြတ်မရပါဘူး..။
သူငယ်ချင်းကောင်းနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတာလဲ နည်းတဲ့ကုသိုလ်ကံမဟုတ်ပါဘူး..။ တန်ဖိုးထားသင့်ပါတယ်..။
မမချောရေးတဲ့ ဒီပို့စ်လေးက သူငယ်ချင်းကောင်း၊မိတ်ဆွေကောင်းတို့ရရှိခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူး တွေကို ထင်ဟပ်ပြသနေခဲ့ပါတယ်...။
အရမ်းပဲ နှစ်ခြိုက်မိပါတယ် မမ..။
စာကောင်းလေးတွေကို ရေးပြီးတင်ပေးနေတဲ့ မမချော ကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေ..။
သူငယ်ချင်းကောင်းဆိုတာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ရင်ဘတ်ပေးပြီးပေါင်းကြသလို ဘယ်သောအခါမှ နောက်ကျောကို ဓါးနဲ့ မထိုးတဲ့သူမျိုးပေါ့...
free php ebooks said...
ရေမျောနေတဲ့ပုရွက်ဆိတ်တစ်ကောင်နဲ့ သစ်ပင်ပေါကနေသစ်ကိုင်းသေးသေးလေး တစ်ကိုင်းမတော်တဆကျသွားတဲ့ငှက်တစ်ကောင် လိုပဲ ငှက်အတွက်ကတော့ဘာမှမသိသာပေမဲ့ ပုရွက်ဆိပ်အတွက်ကတော့တစ်ဘ၀စာပဲလေ။ ကောင်းတယ်